I-Semalt Isexwayisa ye-Botnet Malware
Iikhowudi ze-Malware okanye ezikhohlakeleyo zikho ukujikeleza iminyaka engaphezu kwe-40, kodwa ukusetyenziswa kwazo ukudala into ethile ihlelwe kweso saziso xa i-botnets yaziswa malunga neminyaka elishumi edlulileyo. Iibhenets zinoxanduva lweziganeko ezikhuselekileyo zezokhuseleko kwi-intanethi kwaye sele zikhusele inani elikhulu leekhomputha kunye nezixhobo zeselula. Njalo inyanga, iikhomputha ezininzi zinokusulelwa yi-botnets, ezithi zivale ezo zixhobo phantsi.
U-Artem Abgarian, oyingcali ekhokelayo ye-13 (Semalt , uchaza kwinqaku ukuba yintoni i-malnet ye-malware, ukuba isasazeka njani kwaye isebenza - giochi esterni.
Igama elithi botnet linamagama amabini ahlukeneyo, umnatha, kunye ne-bot. I-botnet liqela leikhomputha ezithelelekileyo ezenza imisebenzi emininzi ngokwemiyalelo okanye iimfuno zabaxhasi be-botmasters. Ikhompyutha nganye yesibini iyakwazi ukuba yi-botnet yimiqathango ayithathiweyo, kwaye awufake ifayile ye-anti-malware. I-Botnets ngamaqela kunye neengqokelela ezinkulu zeenkqubo ezidibaniswa kunye kunye nenethiwekhi okanye inkqubo yokusebenza. Abantu abasebenzayo okanye abhale i-malware abakwazi ukungena kuwo onke amacebo, kodwa banokulawula ngokuqinisekileyo izenzo zabo.
Indlela yokufumana ukuba ikhomputer yakho inxalenye yebhokisi?
Kulula ukufumana ukuba ikhomputer yakho yinxalenye yebhokisi kwaye unokuvavanya igalelo layo ekusebenzeni kwesixhobo sakho. Xa iikhomputha ziba yingxenye yebhokisi, zisebenza ngokukhawuleza kwaye zingenzi ngokwemiyalelo yakho..Ngaphezu koko, iiwebhusayithi aziyikulayisha ngokufanelekileyo, kwaye iinkqubo zakho zokusebenza zilawulwa ngokugqithiswa ngemibuzo eninzi. Ukuziphatha okunjalo kubonakala kubasebenzisi ukuba bazisile ukuba iindawo ze-botnets zikhoyo. Bangakwazi okanye bangakuvumeli nto malunga nobukho babo kuba iibhota zivame ukusebenza ngokuthula.
njani i-botnets isebenza?
Njengoko sele sichazile, iibhenets ziyalelwe ukuba zenze imisebenzi ethile. Bakhulu becala ukutshintsha ulwazi lomntu siqu ezifana neenkcukacha zekhadi lesikweletu kwaye zingabonakali kubasebenzisi ngenxa yokuziphatha kwazo. Iibhentshi zisetyenziswa kakhulu ngabadlali abanobubi, ababizwa ngokuba yi-botmasters. Umyalelo kunye neeseva zokulawula zenzelwe ukuhlahla iibhotile.
Umngcipheko wabantu abashishini kunye nabasebenzisi basekhaya:
Ubungozi obunxulumene ne-botnets kuyafana neengozi zeenkqubo ezinobungozi kunye nemisebenzi enomdla kwi-intanethi. Ngokomzekelo, iibhenets zenzelwe ukweba ulwazi lwakho kunye nokufikelela kwiinkcukacha zekhadi lakho lekhredithi. Baphinde bafikelele kwiipropati zakho zengqondo, iimpawu kunye neephasiwedi kwaye ngamanye amaxesha kukunyanzela ukuba ucofe kwiikhonkco zabo kwiiwebhusayithi ezihambelanayo. Kufuneka uqonde ukuba xa ikhompyutha yakho isulelekile, ayiyi kuphinda isebenze njengeemfuno zakho kodwa iya kwenza imisebenzi eyabelwe yi-hacker.